Ka hel Instagram-ka Like dheeri ah ▷ ➡️ Kuwa raaca ▷ ➡️
Kusoo hel waxyaabo aad jeceshahay barta Instagram
December 28, 2018 0 comments 1151
Tilmaamaha 5 si aad u hesho jecleysi badan barta Instagram
Adeegsiga xashiishka caanka ah
Hashtags waxay bixisaa waddo wanaagsan oo lagu helo jeclaanta Instagram sawiradaada Hashtags waxay ku salaysnaan kartaa mowduuca, qaabka sawir qaadista ama socodsiinta, miirayaasha Instagram, goobta ama codsiyada. Waxa kale oo aad dooran kartaa mid ka mid ah calaamadaha caanka ah ee loo adeegsado, sida #photooftheday, #instagood ama #tigers. Sahaminta xiisaha loo adeegsado isticmaaleyaasha kale si aad u hesho jecleysi badan barta Instagram. Haddii aad u maleynaysid ku darista calaamadahan taleefankaaga inay adag tahay, sawir waad ka dhajin kartaa taleefanka. Kadib, adoo adeegsanaya boggaga internetka ee ku saleysan shabakada Instagram, koobi oo ku dheji haashyada qoraallada qabyada ah emaylkaaga, dokumenti keyd ah ama adeegso Tagstagram.
Kaqeyb qaado nashaadaadka bulshada.
Waxyaabaha aan la tirin karin ee 'Instagram' ee shabakadaha bulshada ee mobilada ayaa ku siinaya ikhtiyaarro aad uga qaybgasho. Mid ka mid ah waxqabadka ugu weyn ee bulshada waa laga yaabaa in kulanka maalinlaha ah ee JJ uu Josh Johnson bilaabay, oo ah isticmaale-yaasha Instagram oo leh ku dhawaad ​​280,000 raacsan. Iyada oo kumanaan xubnood ah, ayaa golaheeda la ballaariyey in hadda lagu daro shabakad daabacayaal u shaqeeya muuji sawirada maalin kasta Si aad uga qaybqaadato, raac Joshua Johnson, soo hel mawduuca maalinta oo u dir sawirradaada. Mowduucyada guud ahaan waxay kuxiran yihiin qaab ama waxa ku jira, sida madow iyo caddaan ama dib-u-dhigis. Bulshooyinka kale ee Instagram waxaa ka mid ah Steetphoto bw, Photooftheday, Ampt, EyeEm iyo kuwa kale oo badan.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee guusha lagu gaadho barta Instagram waa ballanqaad, sida bulsho kasta ama shabakad bulsho. Inta badan ee aad waqtigaaga lahesho oo aad ladhaqmato xubnaha kale, ayaa inbadan oo ka mid ah ay kugula midoobi doonaan adiga sidaasna aad kuhesho jaceyl badan Instagram. Sida sawirrada kuwa kale ugana tag faallooyinka fikirka leh si aad u soo jiidatid. Bixinta feejignaan dheeri ah ee sawirrada dadka ka baxsan kooxdaada saaxiibada dhow waxay ku siinaysaa jecleysi badan iyo raacsan. Dhanka kale, asxaabtaadu way ogaan doonaan shabakadaadana si dhakhso leh ayey u fidi doontaa. Xullo sawirro aad jeceshahay, maadaama ay mudan tahay inaad la macaamisho dadka isticmaala Instagram ee xiiseynaya noocyada la midka ah sawir qaadista.
Noqo hal abuur leh tafatirka sawirka
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tijaabiso shaandhooyinka Instagram, laakiin halkaas ha ku joojin. In kasta oo ay yihiin wax cajiib ah, haddana waxaa jira xulashooyin aan xadidneyn oo leh codsiyada Android iyo macruufka sawir qaadayaasha mobilada xiisaha leh. U adeegso Adobe Photoshop Express ama Snapseed si aad u tafatiriso sawirrada, ama PicCollage ama Fuzel, codsiyo hal abuur leh oo kuu oggolaanaya inaad abuurto kolonyo la yaab leh. Abuur qaabkaaga saxiixa oo ku dar sumaddaada sawirradaada. Mar alla marka aad dhidibada u aasaastid ama qaabkaaga qaaska ah, si ka fudud ayaa loo sixi doonaa si dhakhso leh oo mar dhow ayaa la dhisi doonaa tiro fara badan oo raacsan.
La Soco Muuqaalka Instagram
Iyadoo ka soo muuqoow barta Instagram Way adag tahay, tani waxay abuuri kartaa kumanaan taageerayaal ah hal maalin. Instagram ma aysan shaacin siyaasadeeda ama shuruudaha xulashada isticmaaleyaasha liiska isticmaaleyaasha la soo jeediyey. Haddii lagaa xulo, waxaad joogi doontaa toddobaad, taas oo ku siin doonta soo-gaadhista ugu weyn ee suurtogalka ah ee shabakadda bulshada oo markaa aad ka hesho Instagram waxyaabo badan Haddii aadan aqoon liiska isticmaaleyaasha la soo jeediyay, waad ku hubin kartaa goobaha: raadso oo ku martiqaad isticmaalayaasha ay soo jeediyeen asxaabta. Liistadu si kala duwanaan ah ayey u kala duwan tahay waxaadna ku dari kartaa aragti xiiso leh, qaab gaar ah, ama niche.
1 Tilmaamaha 5 si aad u hesho jecleysi badan barta Instagram
1.1 Adeegsiga xashiishka caanka ah
1.2 Kaqeyb qaado nashaadaadka bulshada.
1.3 Sii oo qaado
1.4 Noqo hal abuur leh tafatirka sawirka
1.5 La Soco Muuqaalka Instagram
Adeegsiga awooda Instagram iyo sawirada si loo dhiso liis raac adag
Qalabka sawirada ugu wanaagsan ee 5 ee loogu talagalay ganacsiyada yaryar